Malunga nathi - Hebei Jinqu Metal Products Co., Ltd.
Hebei Jinqu Metal Products Company Ltd. yasekwa ngo-2005 ngonyaka Anping County. Inkampani igubungela indawo eyi-30,000m2, ibandakanya iindibano zocweyo ezine zeMveliso, indawo yokugcina ezimbini kunye noqeqesho lokuhlola.
Iinjineli zethu zinamava ngaphezulu kweminyaka eli-10 kwaye samkela i-OEM kunye nokwenza ngokwezifiso.
Umphicothi zincwadi wamaxabiso uya kulawula ngokungqongqo iindleko kunye nokuqinisekisa ukuba wonke umthengi unokufumana oko ukuhlawuleleyo.
Sichithe umgca wethu wokuvelisa kunye ne-grilling mesh ibandakanya i-stainless steel grill mesh, Round bbq grill mesh, Square barbecue mesh, Grill net with handles, Grill mesh grate, Japan Japan disposable grill wire mesh, Korea disposable grill mesh.
Injongo yethu kukubonelela ngeenkonzo zethu ezilungileyo ngokuzinikela ngokupheleleyo kunye nokunyaniseka ngelixa sigcina imigangatho ephezulu yokusebenza kunye nokusebenza, kukubonelela ngesisombululo sezoshishino esinokutsha esinokusinceda ukuba siholele ekuzibophezeleni ukugqithisa ukulindela komthengi wethu, ukudala iimeko zokusebenza ezikhuselekileyo nezikhuselekileyo kubasebenzi bethu ngamathuba amakhulu okubanceda ukuba bakhule kunye nenkampani.
Siqinisekile ukuba ngenkxaso yawo onke amaqabane ethu kunye nabathengi kunye nokunyamezela nokuzimisela kwabantu bethu, zonke iinzame zethu zekamva ziya kuqhubeka nokuba nempumelelo.
Gcina kwaye uphakamise ifuthe lethu lophawu kumhlaba wocingo weGrill.
Ixabiso lilingana nexabiso kunye nenkonzo yokunyusa ixabiso, senza abathengi imeko yokuphumelela.
1) Ngaphezulu kweminyaka eli-15 yokuvelisa umnatha wocingo
2) Iqela lokuThengisa.
3) inkonzo egqibeleleyo emva-kwentengiso
4) injineli enamava kunye nomsebenzi abanezakhono
5) Ukunyaniseka noxanduva
6) Ukuhlolwa kwemveliso ngaphambi kokuziswa.
7) Umzi-mveliso wethu ukufutshane nokulayisha izibuko, kulunge kakhulu ukuthunyelwa.
8) Isatifikethi se-ISO9001, i-SGS kunye novavanyo lomntu wesithathu